ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှလာသော စက်လှေတစ်စီးကို ရေတပ်မှပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး ~ Myanmar Express
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှလာသော စက်လှေတစ်စီးကို ရေတပ်မှပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
တောင်ရွာကမ်းခြေသို့ ပင်လယ်ဘက်မှ ချည်းကပ်လာသော မသင်္ကာဖွယ်စက်လှေ ၃ စီးအား မောင်တောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်(ရေ)မှ ထပ်မံလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့် စက်လှေသုံးစီးအနက် တစ်စီးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။အဆိုပါ စက်လှေပေါ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ၈ ဦးကို M-16 သေနတ်များနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် တပ်မတော်(ရေ)မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားသုံးဦး ခေါင်း၌ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် စစ်တွေဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျန် ၇ ဦးကို ယနေ့နေ့လယ် ၄ နာရီခွဲတွင် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း စစ်တွေမြို့ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 7Day News သို့ပြောသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်အပိုင် ဆင်တပ်မော်ကျွန်းပေါ်ရှိ စစ်ကဲပြင်ရွာအနီးသို့ စက်လှေတစ်စီးချည်းကပ်လာရာ ရေတပ်သင်္ဘောမှ စစ်ဆေးရန် ရပ်တန့်ခိုင်းသည်ကို မနာခံသဖြင့် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။စက်လှေပေါ်တွင် အမျိုးသားရှစ်ဦးပါရှိပြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အဒူဆလင်(၂၅နှစ်) ၏ခေါင်းကိုထိမှန်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို စစ်တွေဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသူများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများအရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ တက်ခ်နပ်ဖ်မှလာသူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု စစ်တွေမြို့မှ မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက YPI သို့ပြောသည်။စက်လှေရပ်တန့်စေရန် ရေတပ်က ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်စဉ် စက်လှေပေါ်မှ လက်နက်များ ရေထဲသို့ပစ်ချခဲ့သည်ဟု ယူဆရသောကြောင့် ၎င်းနေရာတစ်ဝိုက်တွင် ရေငုပ်သမားများဖြင့် ရှာဖွေလျှက်ရှိသည်။ဆင်တပ်မော်ကျွန်းသည် စစ်တွေမြို့မှ စက်လှေဖြင့် နာရီဝက်ခန့်သွားရသော အကွာအဝေးတွင်ရှိသည့် ရခိုင်လူမျိုးများနေထိုင်ရာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။Myanmar Express
16 July 2012 06:46
Myanmar Navy and Myanmar Bangladesh border security officers shoot and kill any Bangladesh Muslim separatists and terrorists.
16 July 2012 07:44
စက်လှေ ၃ စီး လုံးကို တခါထဲ ပစ် မြုပ်လိုက်ရင် ပီးကော...
16 July 2012 08:35
ဖမ်ခေါ်လာပြိး ထောင်ချမယ် လွတ်ရင် ဘယ်ကိုပြန်ပို့မှာလည်း. ဘယ်သူကပြန် လက်ခံမှာလဲ တစ်ကယ်သိချင်ပါတယ်. အကယ်၍. ဘယ်ကမှလက်မခံရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲ?
16 July 2012 12:32
သင်းကွပ်ပြီး လာရာလမ်းကို ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါ။
16 July 2012 15:07
Behead these muslim terrorists.
16 July 2012 23:19
Myanmar government camp all Bangladesh muslims and deport all Bangladesh Nazi Fascist muslim invaders to Bangladesh.
17 July 2012 05:09
ပြည်ပ အားကိုးစ ပြုလောသော KNU မှ ၄င်းတို့ ရင်ဆိုင်နေရဆဲ အခက်အခဲများကို နော်ဝေး အစိုးရအား တင်ပြ
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) သည် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် အရေးကြီးေ သာ စခန်းဆင့် (၃) ရပ်၌ အခက်အခဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နော်ဝေးနိုင်ငံခြ...